China Uveliso lweNdibano yeTurnkey yePcb eshibhile kunye neFactory |KAISHENG PCB
Ukwaleka ngesinyithi:Ukuntywiliselwa kweGolide
Metal Coating: Ukuntywiliselwa Gold Indlela yeMveliso: SMT + Iileya: 2 Layer PCB
Iintlobo zeSolder: I-RoHS iyahambelana Iinkonzo zokumisa enye: Ukwenziwa kwePCB kunye neNdibano yePCB yeTurnkey Uvavanyo: 100% AOI / E-test / Visual Test
Amagama angundoqo: Imveliso ye-PCB yobuninzi ye-PCB Assembly, i-PCB turnkey, i-PCB Assembly Manufacturers, i-PCB inkonzo yevenkile enye, i-PCB yeNdibano exabiso liphantsi, iiNkampani zeNdibano zeBhodi yeSekethe eprintiweyo
Izizathu zokukhetha iPCBIkamva
1. Top kumazwe angaphandle high-frequency ibhodi yesekethe imathiriyeli ekrwada ukuqinisekisa umgangatho imveliso evela kumthombo.
2. Isethi epheleleyo yezixhobo zonyango ezingaphezulu zinokuhlangabezana neemfuno zamashishini ahlukeneyo.
3. Isakhono sobuchule seBhodi yeSekethe yePCB eKhokelayo.
4. Inkqubo yokulawula umgangatho we-PCB engqongqo yokuqinisekisa ngokufanelekileyo ukusebenza kwemveliso.
5. IQela lobuGcisa eliPhezulu.
6. Inkonzo esondeleyo.
6. Izixhobo eziluncedo.
Ingaba ixabiso lakho elicatshuliweyo libandakanya ntoni?
Siza kukunika amaxabiso endibano yePCB.Amaxabiso endibano yePCB ibandakanya izixhobo zokusebenza, itemplates ze-solder kunye nendibano yabasebenzi yokulayisha amacandelo.Iingcaphuno zethu zeqhosha lokujika zikwabonisa amaxabiso ecandelo njengoko kubonisiwe.Asihlawulisi mali yokufakela okanye imirhumo yendibano ye-NRE.
Lithini ixesha lokukhokela kwi-odolo yeqhosha lokujika?
Iyonke iProjekthi yeXesha lokuKhokela lixesha lokukhokela iCandelo lokuThengwa kweeMpahla kunye nexesha lokukhokela iNdibano yePCB.Nangona kunjalo, sizama ukwenza mfutshane umgca wexesha ngokulungelelanisa inkqubo yethu yendibano yePCB.Umzekelo, sakuba sifumene iiFayile zakho zeGerber zokwenza iPCB kunye neBOM yendibano yePCB, siya kuqalisa ukulungiselela istencil yebhodi yakho kwaye sigqibezele ulwakhiwo ngaxeshanye kunye nenkqubo yokuthengwa kwezixhobo.
I-PCBFuture iya kongela ixesha okanye iindleko kwaye inciphise iingozi ezinokubakho ukufumana uxanduva lokubandakanya ababoneleli abaninzi.Sixhasa ukujika ngokukhawuleza kunye nexesha eliqhelekileyo lokuhambisa ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.Sineqela elomeleleyo elenziwe ngabaphathi abaqinisekisiweyo ukuqinisekisa umgangatho weebhodi zakho zesekethe.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye unemibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelanasales@pcbfuture.com, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Ngaphambili: Turnkey PCB Electronic Assembly
Okulandelayo: INdibano yeBhodi yeSekethe
indibano pcb cheap
umenzi wendibano ye-pcb
pcb ibandla kufutshane nam
iinkonzo zendibano ye-pcb
ukwenziwa kwe-pcb kunye nendibano
iindibano zeprototype pcb
jika ngokukhawuleza indibano ye-pcb
indibano ye-pcb ye-turnkey